Dad isku Qoys ah Oo lagu dilay Galgaduud | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Dad isku Qoys ah Oo lagu dilay Galgaduud
Dad isku Qoys ah Oo lagu dilay Galgaduud
Weerarka oo lagu dilay Saddex Ruux oo isku qoys ahaa ayaa waxaa uu ka dhacay degaanka Garasle oo Dagmada Balanballe ee Gobolka Galgaduud u jira masaafo dhan 100km dhanka galbeed .
Maleeshiyaad hubeysan ayaa waxaa la sheegay in Saddex Ruux ay ugu tageen Gurigooda sidaasina ay ku dileen, iyaga oo baxsaday maleeshiyaadkii hubeysnaa ee falkaasi geeysatay.
Dad ku sugan degmada Balanballe ayaa waxaa ay sheegeen in dhacdadaan lala xiriirinayo dilal aanooyin qabiil ah oo bilihii la soo dhaafay ka taagnaa degaano hoostaga degmada Balanballe ee Waqooyga Gobolka Galgaduud.
Meydadka saddex Ruux oo kala ah laba Wiil oo Walalale ah iyo Gabar ay Abti u ahaayeen ayaa waxaa la geeyay degmada Balanballe ee Gobolka Galgaduud, halkaas oo la filayo in saacadaha soo socda lagu Aaso.
Weerrarka dadka isku qoys ah lagu dilay ee ka dhacay duleedka degmada Balanballe ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli maalin ka hor degaanka Haraale oo hoostaga Balanballe lagu dilay hal Ruux todobo kalena lagu dhaawacay.